नारायणी विकास बैंकले हकप्रद सेयर निष्काशन मिति तोक्यो ! - Arthasansar
नारायणी विकास बैंकले हकप्रद सेयर निष्काशन मिति तोक्यो !
शुक्रबार, २४ पुस २०७७, ११ : १९ मा प्रकाशित
नारायणी विकास बैंकले मंगलाबार नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट हकप्रद सेयर निष्काशनको अनुमति पाएपछी माघ १३ गतेबाट हकप्र्रद सेयर जारी गर्ने भएको हो ।
बैंकले १ः१ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशनको अनुमति पाएको हो अर्थात पहिले बैंकको १ कित्ता सेयर हुने सेयरधनीहरुले १ कित्ता बाराबर नै हकप्रद सेयर पाउनेछन् । बैंकले ६ लाख ५६ हजार १६९ कित्ता सेयर १ सय रुपैया अंकित मूल्यमा ६ करोड ५६ लाख १६ हजार ९०० रुपैया बराबरको हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो ।
हकप्रद सेयर निष्काशनका लागि बैंकले पुस २९ गते बुकक्लोज गर्ने जनाएको छ अर्थात पुस २८ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरुले मात्र हकप्रद सेयर पाउनेछन् ।
बैंकको हकप्रद सेयर बिक्रि प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ । हकप्रद सेयरका लागि बिक्रि प्रबन्धकको कार्यलय जमल,नारायणी बैंकको केन्द्रिय कार्यलय र शाखा कार्यलयहरु, धितोपत्र बोर्डबाट सिआस्वा अनुमति प्र्राप्त बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरु का साथै मेरो सेयर सफ्टवेयर मार्फत फाल्गुन ३ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने बैंकले जनाएको छ ।
क्रेडिट रेटिङ एजेन्सि इक्रा नेपालले बैंकलार्ई इक्राएनपीआईआर सिङ्गल सी’ रेटिङ प्रदान गरेको छ । यस्तो रेटिङले समयमा वित्तिय दायित्व पुरा गर्ने सम्बन्धमा उच्च जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।